विदेशबाट छुट्टीमा नेपाल आएका प्रतापको र’ह’स्य’मय मृ’त्यु, अनुसन्धान सुरू – AB Sansar
विदेशबाट छुट्टीमा नेपाल आएका प्रतापको र’ह’स्य’मय मृ’त्यु, अनुसन्धान सुरू
October 9, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on विदेशबाट छुट्टीमा नेपाल आएका प्रतापको र’ह’स्य’मय मृ’त्यु, अनुसन्धान सुरू
म्याग्दी । जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगका २५ वर्षीय प्रताप सिञ्जालीको र’हस्यमय मृ’त्युका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । यही असोज ६ गते साथीसँग भगवतीको पर्यटकीयस्थल रुइसे घुम्न जाँदा घा’इते र बे’होस भएका सिंजालीको १६ गते राति पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्र’ममा मृ’त्यु भएको थियो ।
घ’टना स्थलको निरीक्षण, उनीसँगै गएका र घ’टना स्थलमा भएकासँग सोधपुछ, चिकित्सकको रिपोर्टलाई आधार बनाएर अनुसन्धान शुरु गरेको म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक किरनजङ्ग कुँवरले बताउनुभयो । “अस्पतालको रिपोर्टका आधार शरीरमा कसरी चो ट लाग्यो भने अनुसन्धान अघि बढाउन भिसेरा परीक्षण गर्न पठाएका छौँ”l
उहाँले भन्नुभयो, “दु’र्घटना भएर ल डेर अथवा कु टपि’ट को कारणले शरीरमा चो ट लाग्यो भन्ने विषयमा घ’टना स्थलमा भएकाहरुसँग सोधपुछ गरिएको छ ।” बिहीबारसहित तेस्रोपटक प्रहरी टोली घ’टनास्थल रुप्से पुगेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक कुँवर आफैँ घ’टनास्थल पुग्नुभएको छ ।
अस्पतालका अनुसार सिंजालीको दायाँ र बायाँका दुई/दुईवटा करङ भाँ चिएको, शरीरमा नि’लडा’म भएको, फोक्सोमा पानी जमेको र टाउकोमा ग’हिरो चो ट लागेको थियो । बे’होस अवस्थामा उनलाई असोज ७ गते बेगखोला स्वास्थ्यचौकी, बेनी अस्पताल हुँदै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो ।
प्रतापसँगै भएका तीन जना, रुइसेमा भ’नाभ’न भएका मल्लाजका युवा र रुइसेका रेष्टुरेष्ट सञ्चालकदेखि त्यस दिन त्यहाँ भएका सबै अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
Breaking : भोलिदेखी अनिश्चितकालका लागि बन्द , घरबाहिर पनि निस्कन नपाउने !
पैसा लिएर पनि शा री रिक स म्प र्क गर्न नदिएको भन्दै एक युवकले महि लालाइ गरे राम धु ला इ !
पहिरोमा परि बेपत्ता भएका ईञ्जिनियर आकाश भेटिएनन्, कि’रिया गर्दै परिवार
March 29, 2021 March 29, 2021 santosh